KOBCISO AQOONTAADA CAFIMAAD; CAADKA INDHAHA ( CATRACT) | Toggaherer's Weblog
BOOSAASO OO LAGU AFDUUBTAY NIN AJAANIB AH GOOR DHAWAYD
CHELSEA OO GUULAYSATAY KADIB SCOLARI , INTER OO XEJISATAY HOGAANKA , BERCELONA OO LA TUMAY
KOBCISO AQOONTAADA CAFIMAAD; CAADKA INDHAHA ( CATRACT)
Posted by: toggaherer on: February 22, 2009
Caadka indhuhu (cataract) waa caad fuula leniska (lens) isha/qaybta isha ee nalku ka gudbo taasoo keenta in araggu dhib noqdo. Caadku waxa uu fuuli karaa hal il ama labada indhoodba. Caadku waxa uu caam ku yahay dadka waaweyn.
Qaar ka mid ah cudurada iyo sonkorta/sonkorowga
Waxa la arkaa iftiin ku wareegsan laydhka ama nalalka ama laydhka/nalalka ayaa si weyn u cad
U tag dhakhtarka indhaha haddii aad qabtid mid ka mid ah calaamadahaa. Dhakhtarkaagu waxa uu sameyn doonaa baadhitaan indho si uu u baadho dhibaatooyin. Haddii dhibaatooyinkaaga araggu ay qas galiyaan hawlo maalmeedkaaga, waxa laga yaabaa in dhakhtarkaagu ku taliyo qalitaan. Qalitaanku waxa uu saaraa leniska caadka leh waxana uu ku beddelaa lenis artifishal ah ama la sameeyay. Adiga iyo dhakhtarkaaga ayaa go’aan ka gaadhi doona haddii qalitaanku yahay daweynta kuugu fiican.
Cun cagaar badan, khudaar iyo cuntooyin kale oo badan oo leh ‘antioxidant’.
Gasho muraadaha qorraxda iyo koofiyad si aad isaga ilaalisid iftiinka qorraxda ee ah ‘ultraviolet’.